သင့်ရဲ့ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်ဖြစ်တည်မှုနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကဲ့ရဲ့ခံခဲ့ရဖူးလား? - Amawpyay
တစ်နည်းအားဖြင့် Body Shamingအလုပ်ခံခဲ့ရဖူးလား?
ဒါမှမဟုတ် သင်ကိုယ်တို င်ကရော သူများရဲ့ဖြစ်တည်မှုကို ဝေဖန်ရှုတ်ချ တတ်တဲ့ သူမျိုးလား?
Body Shaming လုပ်တယ် ဆိုတာဟာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အမြဲလိုလို ကြုံတွေ့နေ ရတဲ့ ကိစ္စတစ်ခု ပဲဖြစ် ပါတယ် ။ တစ်ချို့တွေဆို ဝေဖန်ခံ ရတာ များလွန်း လို့ နေသားကျ သွားတာမျိုးတောင် ရှိတတ် ပါတယ်။
လူရယ်လို့ဖြစ် လာရင် အားနည်းချက် ကိုယ်စီ ရှိကြ တာ ပါပဲ။ ပြည့်စုံနေတဲ့ လူရယ် လို့မရှိပါ ဘူး။ ၀ချင် ၀မယ်၊ ပိန်ချင် ပိန်မယ်၊ ဆံပင်ပါး ရင်ပါး မယ်၊ သွားခေါ ရင်ခေါမယ်၊ အသားဖြူ ချင်ဖြူမယ်၊ မည်းချင် မည်းမယ် ဒါတွေဟာဖြစ်တည်မှု တစ်ခု သက်သက် ပါပဲ။
ဒီလို ဖြစ်တည် လာတာဟာ ဘာများ မှားသွား ပါသလဲ? ဒီလို ဖြစ်တည်မှု ထဲမှာ ဘာများဝေဖန်စရာ ရှိနေ ပါသလဲ?
Body Shamingလုပ် တာဟာ နေ့စဉ် ဘဝထဲမှာ ကိုပဲ အမြဲလိုလို ကြုံတွေ့နေ ရပါတယ်။ ဥပမာ-မတွေ့တာကြာလို့ ပြန်တွေ့တဲ့ သူငယ်ချင်းကို နှုတ်ဆက် တဲ့အခါမှာ
(ဟယ် နင်အရမ်းဝလာ တာပဲ၊ အသားတွေ မည်းသွား တယ်နော်) စသည်ဖြင့် ထမင်းစားရေသောက် သလိုမျိုးနဲ့ Body Shamingကို လွယ်လွယ် ကူကူပြုလုပ်နေ ကြပါတယ်။
ဝဝတုတ်တုတ် ကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ အတန်းထဲက နာမည်ပြောင်က ဝက်ကြီး၊ နဖူးပြောင်တဲ့ ကလေးမ‌လေးရဲ့အတန်းထဲက နာမည်ပြောင်က ပြောင်ကြီး စသည်ဖြင့်
ကလေး ဘဝ ကတည်းက ကိုယ့်ရဲ့ ရုပ်ရှည်သွင်ပြင်ဖြစ်တည်မှုနဲ့ ပက်သက်ပြီး နေ့စဉ်နဲ့အမျှ BodyShaming လုပ်ခံေ နရပါတယ်။
ဒါဟာ အပြောင်အပြက် သဘော ပဲဖြစ်စေ၊ တမင်ရည်ရွယ်ပြီးဖြစ်စေ လုံးဝကို မပြုလုပ်သင့်တဲ့ ကိစ္စပါ။ ကိုယ်ကတော့ စကားလေး တစ်ခွန်းနဲ့ မထင်မှတ် ဘဲပြောလိုက် တယ်ဆိုပေမယ့်လို့ တစ်ယောက် တစ်ခွန်းဝေဖန် ရင်းကနေ ကြားရတာ များလာတဲ့အခါမှာ –
5.အဆိုးမြင် စိတ်ဖြစ်ပေါ်တာ စတဲ့အရာတွေ ကန အဆိုးဆုံး အခြေအနေတွေ အထိပါ စိတ်ဖောက်ပြန်မှုတွေဖြစ် သွားတတ် ပါတယ်။
တကယ်တော့ Body Shamingအလုပ်ခံရတဲ့ သူဟာ လုံးဝ ရှက်နေဖို့ မလိုပါဘူး။ လူရယ်လိုဖြစ်လာတဲ့ အတွက်ဖြူဖြူ၊ မည်းမည်း၊ ပုပု၊ ဝ၀၊ ပိန်ပိန် ဘယ်လို ပဲဖြစ်နေ ပါစေ ကိုယ်ရဲ့ဖြစ်တည်မှု သာလျှင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ကိုယ့်ကို ကိုယ်ချစ်တတ် ဖို့ပဲ လိုတာပါ။
Body Shamingလုပ်တဲ့ သူတွေ ကသာ ရှက်ရမှာပါ။ ကိုယ်က သူများရဲ့ရုပ်ရည်ကို သွားဝေဖန်နေလို့လည်းကိုယ့်အတွက် ဘာအကျိုးမှ ထူးမလာ ပါဘူး။
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ လူဆိုတာ မရှိလို့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးမရှိတဲ့ Body Shamingကို ရပ်တန့်လိုက်ကြဖို့ တောင်းဆိုချင် ပါတယ်။
သငျ့ရဲ့ ရုပျရညျသှငျပွငျဖွဈတညျမှုနဲ့ပတျသတျပွီး ကဲ့ရဲ့ခံခဲ့ရဖူးလား?
တဈနညျးအားဖွငျ့ Body Shamingအလုပျခံခဲ့ရဖူးလား?
ဒါမှမဟုတျ သငျကိုယျတို ငျကရော သူမြားရဲ့ဖွဈတညျမှုကို ဝဖေနျရှုတျခြ တတျတဲ့ သူမြိုးလား?
Body Shaming လုပျတယျ ဆိုတာဟာ ပတျဝနျးကငျြမှာ အမွဲလိုလို ကွုံတှနေ့ေ ရတဲ့ ကိစ်စတဈခု ပဲဖွဈ ပါတယျ ။ တဈခြို့တှဆေို ဝဖေနျခံ ရတာ မြားလှနျး လို့ နသေားကြ သှားတာမြိုးတောငျ ရှိတတျ ပါတယျ။
လူရယျလို့ဖွဈ လာရငျ အားနညျးခကျြ ကိုယျစီ ရှိကွ တာ ပါပဲ။ ပွညျ့စုံနတေဲ့ လူရယျ လို့မရှိပါ ဘူး။ ဝခငျြ ဝမယျ၊ ပိနျခငျြ ပိနျမယျ၊ ဆံပငျပါး ရငျပါး မယျ၊ သှားခေါ ရငျခေါမယျ၊ အသားဖွူ ခငျြဖွူမယျ၊ မညျးခငျြ မညျးမယျ ဒါတှဟောဖွဈတညျမှု တဈခု သကျသကျ ပါပဲ။
ဒီလို ဖွဈတညျ လာတာဟာ ဘာမြား မှားသှား ပါသလဲ? ဒီလို ဖွဈတညျမှု ထဲမှာ ဘာမြားဝဖေနျစရာ ရှိနေ ပါသလဲ?
Body Shamingလုပျ တာဟာ နစေ့ဉျ ဘဝထဲမှာ ကိုပဲ အမွဲလိုလို ကွုံတှနေ့ေ ရပါတယျ။ ဥပမာ-မတှတေ့ာကွာလို့ ပွနျတှတေဲ့ သူငယျခငျြးကို နှုတျဆကျ တဲ့အခါမှာ
(ဟယျ နငျအရမျးဝလာ တာပဲ၊ အသားတှေ မညျးသှား တယျနျော) စသညျဖွငျ့ ထမငျးစားရသေောကျ သလိုမြိုးနဲ့ Body Shamingကို လှယျလှယျ ကူကူပွုလုပျနေ ကွပါတယျ။
ဝဝတုတျတုတျ ကလေးငယျလေးတှရေဲ့ အတနျးထဲက နာမညျပွောငျက ဝကျကွီး၊ နဖူးပွောငျတဲ့ ကလေးမ‌လေးရဲ့အတနျးထဲက နာမညျပွောငျက ပွောငျကွီး စသညျဖွငျ့
ကလေး ဘဝ ကတညျးက ကိုယျ့ရဲ့ ရုပျရှညျသှငျပွငျဖွဈတညျမှုနဲ့ပကျသကျပွီး နစေ့ဉျနဲ့အမြှ BodyShaming လုပျခံေ နရပါတယျ။
ဒါဟာ အပွောငျအပွကျ သဘော ပဲဖွဈစေ၊ တမငျရညျရှယျပွီးဖွဈစေ လုံးဝကို မပွုလုပျသငျ့တဲ့ ကိစ်စပါ။ ကိုယျကတော့ စကားလေး တဈခှနျးနဲ့မထငျမှတျ ဘဲပွောလိုကျ တယျဆိုပမေယျ့လို့ တဈယောကျ တဈခှနျးဝဖေနျ ရငျးကနေ ကွားရတာ မြားလာတဲ့အခါမှာ –
5.အဆိုးမွငျ စိတျဖွဈပျေါတာ စတဲ့အရာတှေ ကန အဆိုးဆုံး အခွအေနတှေေ အထိပါ စိတျဖောကျပွနျမှုတှဖွေဈ သှားတတျ ပါတယျ။
တကယျတော့ Body Shamingအလုပျခံရတဲ့ သူဟာ လုံးဝ ရှကျနဖေို့ မလိုပါဘူး။ လူရယျလိုဖွဈလာတဲ့ အတှကျဖွူဖွူ၊ မညျးမညျး၊ ပုပု၊ ဝဝ၊ ပိနျပိနျ ဘယျလို ပဲဖွဈနေ ပါစေ ကိုယျရဲ့ဖွဈတညျမှု သာလြှငျ အကောငျးဆုံးပါပဲ။ ကိုယျ့ကို ကိုယျခဈြတတျ ဖို့ပဲ လိုတာပါ။
Body Shamingလုပျတဲ့ သူတှေ ကသာ ရှကျရမှာပါ။ ကိုယျက သူမြားရဲ့ရုပျရညျကို သှားဝဖေနျနလေို့လညျးကိုယျ့အတှကျ ဘာအကြိုးမှ ထူးမလာ ပါဘူး။
ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ လူဆိုတာ မရှိလို့နှဈဦးနှဈဖကျ အကြိုးမရှိတဲ့ Body Shamingကို ရပျတနျ့လိုကျကွဖို့ တောငျးဆိုခငျြ ပါတယျ။